Iberdrola inotangisa mari yekutora yekambani yeBrazil | Ehupfumi Zvemari
Parizvino, chimwe chezvinhu zvinopisa kwazvo mumatunhu eSpanish hapana mubvunzo Iberdrola. Kwete pasina, iyo Kambani yemagetsi Kambani yeSpain yasarudza kuvhura bhoti yekutora kune muparadzi weBrazil Eletropaulo. Nechinangwa chekutenga pakati pe51% ne100% yekugovana. Mupfungwa iyi, kambani yemagetsi yeBrazil Neoenergia, 52,45% yeIbedrola, inoda kuwana muparidzi weRio de Janeiro Eletropaulo aine kudyara pakati pe504 ne1.007 mamirioni euros. Chokwadi chiri kutungamira varimari vashoma nepakati kuti vasarudze kuti vapinde here kana kuti vagadzirise zvinzvimbo muukoshi uhu hwenyika inosarudzika indekisi, Ibex 35.
Kuita kwaIberdrola hakuna kutora nguva refu kuti iuye mumisika yemari. Mupfungwa iyi, zvikamu zveIberdrola zvakakwira panhau, kunyangwe ivo vakamuka zvine mwero. Kusvikira pakukoshesa inenge hafu yepesenti poindi yekumira pa6,25 euros pamugove. Izvo zvinofanirwa kuyeukwa kuti iko kwakaunganidzwa kwegore rekambani yemagetsi inotungamirwa naIgnacio Sánchez Galán haina kunaka zvachose. Kusvika padanho re kudzikira nezve 1,50%. Kunyangwe isiri imwe yetsika dzakadonha zvakanyanya mukutanga kwegore, kunyanya kana munhu achifunga kuti shanduko yemari dzeSpanish munguva ino haisi kuzotarisirwa. Nekuderera kweanopfuura 5%.
Kune rimwe divi, kubva kukambani yemagetsi yeSpanish inoratidzwa mune chirevo kuNational Securities Market Commission (CNMV) padanho rekushanda. Kutsanangura kuti yakazvipira kuvhura mari yekutora ye tenga pakati pe51% ne100% yeguta guru naEletropaulo. Ichi chiitiko chemakambani chaizomiririra kubhadharwa pakati pe2.134 uye 4.269 mamirioni reais. Kana chii chakafanana, pakati pe504 ne1.007 mamirioni euros. Chimwe chinhu chakasiyana kwazvo mashandisiro avachaita mari kuvashandi vatsva ava naIberdrola. Kunyangwe panguva ino, kufamba kwacho hakuna kunyanya kukwirira maererano nesimba.
1 Iberdrola: yakatsiga kukosha
2 5% chikamu chemugovano
3 Kugadzirwa kwayo muSpain kunokwira
4 Sekukosha kwekutizira
5 Yakakura vhoriyamu yekutora
Iberdrola: yakatsiga kukosha
Kana paine chimwe chinhu chinoratidzira zvikamu zveiyi kambani yemagetsi, imhaka yekudzikama mumutengo wemasheya ayo. Ivo vagara vakawanikwa mune yakamanikana kwazvo margin yakatenderedza iyo mazinga e6 euros pamugove. Kubva pane ino mamiriro, kushomeka kwayo haisi imwe yadzo inonyanya kukosha madhinomine. Zvakapesana kwazvo, nekuti neimwe nzira ndeimwe yeanokoshesesa maitiro eIbex 35. Nekuti kusiyana kwayo kwemutengo hakuonekwe chaizvo.
Uye zvakare, iyo kambani yemagetsi ndeimwe yemaitiro anochengetedza mune yakasarudzika indekisi yemari yenyika. Kunyanya nekuti inochengetedza imwe kugadzikana zvine chekuita nemitengo yemigove yavo. Mumakore achangopfuura ivo vakatamira mune imwe nhanho inotangira kubva ku5,50 euros kuenda ku6,50 euros. Pasina kana chero kamwe kamwe shanduko mavari. Chinhu chinonyanya kufarirwa nevachengeti vanozvidzivirira zvakanyanya. Mupfungwa iyi, ivo vanotsvaga zvakanyanya chengetedzo yemasevha avo pamusoro pedzimwe nzira dzine hukasha. Sezvo zvakawandisa, ivo vanopa yakanaka chikamu yezvaanotaura kubva kune ino yakakosha chikamu yeSpanish stock stock.
5% chikamu chemugovano
Chimwe chezvinhu zvaro zvinokwezva zvakanyanya chiri muchikamu icho chinopa kune vagovana navo. Mupfungwa iyi, Iberdrola inogadzira kufarira kweiyi pfungwa ye4,81%, imwe yepamusoro soro muSpanish equities. Kuburikidza nemubhadharo unogoneka kaviri pagore uye izvo zvichaenda kune yako yekutarisa account mumazuva ekuitwa kwayo. Kune rimwe divi, ndeimwe yemaitiro iwe aunogona kushandisa kubva ikozvino kuvhura nzvimbo munzvimbo ino yekuchengetedza, inova imwe yeinonyanya kufarirwa nevashambadzi vadiki nepakati.
Chimwe chezvinhu zvakakosha zveiyi kukosha ndechekuti Iberdrola ndeimwe yeiyo zvitema machipisi kubva kumusika wemusika wenyika. Nenzira iyi, inokwezva chikamu chikuru chemisoro mikuru, zvese yenyika nekunze kwemiganhu yedu. Kusvika padanho rekuti zvikamu zvaro zvinosanganisirwawo muEurostoxx, iyo inonyanya kukosha indekisi yemari mukondinendi yakare. Chinhu chinodudzira kuti ndiyo imwe yetsika dzakateedzerwa munzvimbo ino yenzvimbo. Iine vhoriyamu yekuhaya yepamusoro soro iwe yaunogona kuwana panguva ino. Saka kuti zvinokupa chengetedzo huru munzvimbo dzauchazovhura kubva mazuva anotevera.
Kugadzirwa kwayo muSpain kunokwira
MuSpain, kugadzirwa kwakakura ne3,2%, Kusvikira 16.091 gigawatt maawa, nekutenda zvakare kune mukuru mupiro wezvinhu zvinogadziriswazve. Seimwe yemipiro mikuru inogadzirwa nekambani yemagetsi iyi, yakaitwa nevashambadziri. Kune rimwe divi, kugadzirwa kwesimba rakachena kwakawedzera ne14,8% pasirese uye kuwedzera kwakanyanya kunoenderana nemhepo yekumahombekombe (86,9%) - nekuda kwekubatana kwepaki yeWikinger, kuGerman - kune onshore mhepo (19,1%) uye hydroelectric ( 6%).
Imwe yesimba rekukosha ndeyekuti iri bhizinesi rakadzikama modhi nemari inodzokororwa iyo inobatsira kuchengetedza inogutsa kwazvo mitengo yemitengo kune vese varairidzi. Ichokwadi kuti chinhu chakakosha icho chausingazove mamioneya, asi zvirinani kuti uve nechivimbo chekuti iwe uchachengeta mari yacho neimwe kugadzikana. Hazvishamise kuti iko kutsauka kuri kushoma, mune imwe pfungwa uye mune imwe. Kuve wakanangidzirwa kune yakanyatso tsanangurwa investor chimiro. Ndokunge, munhu anoda kuchengetedza capital yavo nekumwe kuongorora uye zvakare anokupa iwe chikamu chemugovano padhuze ne5%.
Chimwe chinhu chaunofanira kukoshesa paIberdrola ndechekuti inogona kuve yakachengeteka nzvimbo, semakambani ese emagetsi, mune nguva dzisingafadzi yemisika yemari. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti hunhu hwayo mumusika zviri pachena zvirinani pane zvimwe zvirevo zvemusika wekutengesa. Kuva mumwe wemabheti uko chikamu chakanaka chemari yevatengesi chinopotera. Nekuti ivo vanove nechokwadi chekuti zvikamu zvavo hazvizotambura zvakanyanya kutwasuka. Mushure mezvose, kutya kuti chikamu chakanaka chevashandisi vemusika wemasheya vanochengeta pavanopinda mumisika yemari.
Kune rimwe divi, zvinonyanya kukosha kuti masheya eiyi kukosha ari panguva yauri kuyedza kudarika mazinga e6,60 euros mugove. Uye izvo zvinoita imwe yemapikisi ayo makuru ayo ane kumberi. Hazvishamisi kuti kana akaipfuura, aizove nenzira yakajeka yekuvhara kusvika kumaeuro manomwe pachikamu. Kunyangwe kugona kwayo kwekudzokorora hakusi imwe yeakasimba kwazvo einosarudza index yeSpanish stock stock. Sezvazviri pamwe nezvose zvakachengetedzeka muSpanish magetsi chikamu. Nezvinangwa zvine mwero kupfuura mune mamwe ese maseji.
Yakakura vhoriyamu yekutora
Yaro rakakwira vhoriyamu mukutsinhana kwekuchengetedzeka inoita imwe yedzinowanzoitika dhinomineta. Kusvika padanho rekuti zuva rega rega mazita mazhinji anopfuudza kubva paruoko achienda kune rumwe. Uine kukwana kwakazara muzvinzvimbo zvavo zvinokutendera iwe kuti upinde, asi pamusoro pezvose kuenda, pasina dambudziko kune zvaunofarira semudhara mudiki nepakati. Mazhinji mazita anotevedzwa zuva rega rega uye ichi chinhu chaunofanirwa kukoshesa zvakanyanya muzvikamu zvekukosha uku muchikamu chemagetsi. Pamusoro pehumwe hunyanzvi uye pamwe kunyangwe kufunga kwakakosha.
Paunenge uchitaura nezve Iberdrola, haugone kukanganwa kuti iko kuchengetedzeka kunoteverwa nevazhinji vatengesi uye izvi zvinobvumidza kuti itorwe nevazhinji vatyairi kupfuura mune mamwe machengetedzo asina mashandiro mashoma mumisika yemari. With kuongorora nguva yemitengo yavo uye kurudziro inoitwa nevarevereri ava. Ndokunge, ivo vachakuudza kana iri nguva yakanaka yekutenga kana kutengesa yavo migove. Nezvavanenge vachizofambisa zano rekudyara nguva dzese. Uine hwakawanda hwakawanda hwehunyanzvi uye hwakakosha ongororo iyo ichave yekubatsira kukuru kwauri kuchinjisa mari yako nedziviriro huru mumafambiro.
Chero zvazvingaitika, iri sarudzo chaiyo chaizvo kana iwe uchida kudzikama kwechinguva. Ivo chave kudikanwa kwekuziva yavo yekoteisheni mumisika mazuva ese. Nepo kune rimwe divi, zvakakosha kuti usatungamire mashandiro ako neiyi kukosha munguva pfupi. Asi asi kuburikidza nekugara kwenguva refu mashandiro uko iwe unokwanisa kuwana kudzoka pane yako mari. Kunyanya iyo mari yakaunganidzwa kuburikidza nezvikamu iwe zvawakagashira kuburikidza nemakore ekugara. Zvese izvi uchishandisa nzira inochengetedza kana inodzivirira nzira yekudyara kuti ishandise purofiti yemhuri. Pamusoro pehumwe hunyanzvi hwekufunga uye pamwe kunyangwe kubva pakakosha poindi pane chikamu chekambani mamiriro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Iberdrola inotangisa mari yekutora yekambani yeBrazil